Switchbot weputara ihe ohuru 2: Ihe mmetụta Motion na kọntaktị kọntaktị | Gam akporosis
Switchbot weputara ohuru ohuru 2: Ihe mmetụta Motion na Sensor Kpọtụrụ
Onyeka Onwenu | | Noticias, Ngwaọrụ ndị ọzọ
Ọganihu nkà na ụzụ enwewo ọganihu dị ukwuu na ndụ anyị kwa ụbọchị, ọ dịkarịa ala dị ka anyị si mara na mbụ. Automlọ akpaaka ụlọ dị n'ọtụtụ ụlọ, na-arụ ọrụ dị mkpa mgbe a bịara ijikọta ya, ma ịgbanye ọkụ site na nchọpụta ma ọ bụ nweta ngwaọrụ site na ekwentị.
Ịgbanwee, ụlọ ọrụ ngwaọrụ ama ama ama ama ama ama Ihe Mgbanwe Mgba ọkụ SwitchBot na Ihe Mgbanwe kọntaktị SwitchBot. Ha bụ ngwaahịa ọhụrụ abụọ ejikọtara ọnụ yana usoro akpaka ụlọ, ihe mmetụta ngagharị na-aba uru maka ụbọchị anyị taa ma zuo oke ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnye ndụ na ngwaọrụ ndị ahụ dị n'ụlọ.
1 Ihe Mgbanwe Mgba ọkụ SwitchBot
2 SwitchBot Kpọtụrụ ihe mmetụta
3 Adabara ihe niile
Ihe Mgbanwe Mgba ọkụ SwitchBot
Nke mbu bu SwitchBot Motion Sensor, a obere sọrọ ngagharị ihe mmetụta dị naanị 2,1 x 2,1 x 1,2 sentimita asatọ. Ekele maka PIR (Passive Infrared) ihe mmetụta ọ nwere ike ịchọpụta ọnụnọ nke mmadụ ọ bụla, ọ na-etinyekwa ihe mmetụta ọkụ iji tụọ ma ọ bụ ehihie ma ọ bụ abalị.
Ihe mmetụta a ga-enwe ike izipu ọkwa na ama ama ejikọtara, mgbe ọ bụla ọ chọtara mmegharị, nke mere ka ọ bụrụ ngwaọrụ zuru oke maka ọnọdụ ndị a. Ọ ga-adị mma maka ụlọ, ọfịs na saịtị nke ndi mmadu gabigara ogologo ubochi.
Ihe mmetụta Mgba ọkụ SwitchBot, agwakọtara ya na ngwaahịa ndị ọzọ SwitchBot, ga-agbasawanye ọrụ ya, gụnyere inwe ike ịgbanye ọkụ n'ụlọ na enweghị ike ịchọpụta gị n'ọchịchịrị. Ewezuga ịgbanye ọkụ, ya na Motion Sensor na ngwaọrụ ndị ọzọ nke ika ahụ, ịnwere ike ịmalite ndekọ vidiyo nke ndị omempụ nwere ike ịme ma ọ bụ mepee ngwa ọ bụla site na ịgafe Sensor Motion.
Nchọpụta Sensor Motion nke SwitchBot bụ ihe dịka mita 9 ya na 115º kwụ ọtọ site na 55º n'ụzọ kwụ ọtọ. Ngwaọrụ nwere ndakọrịta na Amazon Aleza na Google Assistant, na mgbakwunye na ịrụ ọrụ naanị batrị AAA abụọ iji ruo afọ 3, a na-atụ aro ka ị jiri batrị alkaline maka nnwere onwe ka ukwuu.
Gwọ nke ihe mmetụta SwitchBot Motion bụ euro 20,91 ma dị na njikọ a.
SwitchBot Kpọtụrụ ihe mmetụta
Ihe mmetụta Mgba ọkụ SwitchBot na ihe mmetụta Sensor SwitchBot, ihe mmetụta dị mma ịwụnye ma n'ọnụ ụzọ ma na windo. Ọ dị mma ịmara ma emepee ụzọ ma ọ bụ windo ka emepere n'oge ọ bụla, na-agbakwunye onwe ya nke ọma na ihe mmetụta ndị ọzọ nke ika SwitchBot.
Ekele maka ihe mgbanaka SwitchBot Contact Sensor ị nwere ike gbanyụọ ọkụ ozugbo ị hapụrụ ụlọ, mana ọ na-agbanye ha na akpaghị aka mgbe ị banyere. Ezigbo ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwuo ma ọ bụ gbanyụọ dabere na ị ga-apụ maọbụ ọ bụrụ na ị banye naanị site na ịhazi ya na mbụ site na mmalite.
Ihe mmetụta ahụ nwere akụkụ abụọ, ihe mmetụta kọntaktị ahụ dị 2,8 x 1 x 0,9 sentimita asatọ, ebe magnet nke na-aga n'ọnụ ụzọ / windo na-agbada ruo 1,4 x 0,5 x 0,5 sentimita. Ihe bụ ihe ọzọ, Kpọtụrụ ihe mmetụta nwere ike ịgwa gị na a ozi ọ bụrụ na mmadụ emepee ụzọ, windo, drawer ma ọ bụ ebe ọ bụla arụnyere, mana chọrọ Hub Mini.
Nchọpụta bụ ihe dịka mita 5, 90º na ntanetị na 50º, ebe anya nke nchoputa na ihe ndọta apụghị ịgafe 30mm maka ịrụ ọrụ ziri ezi. Ihe mgbanwe kọntaktị SwitchBot na batrị AAA abụọ na-arụ ọrụ maka afọ 3 echere, na-adaba na Google Assistant na Amazon Alexa.
Ngwaọrụ dị na njikọ a maka euro 20,91.
Adabara ihe niile
Site na isi ihe magnetik, ihe ngbanwe SwitchBot Enwere ike itinye ya ebe ọ bụla n'ime ụlọ, dịka paseeji, ụlọ, mgbidi, shelf, n'ọnụ ụzọ, na friji, ma ọ bụ n'okpuru akwa. Uru ya bara ụba, karịchaa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịchịkwa isi okwu dị iche iche.
Ihe Mgbanwe Mgba ọkụ SwitchBot na Sensor kọntaktị SwitchBot bụ ngwaọrụ zuru oke maka ma n'ụlọ ma ọrụ, ebe ha anaghị achọ nrụnye dị mgbagwoju anya. Ha abụọ nwere ike ịrụ ọrụ ọnụ, otu maka nchọpụta nke mmegharị mmadụ ọ bụla, ebe Kọntaktị Kọntaktị zuru oke maka ọnụ ụzọ, windo, drọwa na ebe ndị ọzọ dị mkpa.
N'ihi nha ha na ịdị arọ ha dị ntakịrị, Mmetụta Motion na kọntaktị kọntaktị bụ nke a pụrụ itinye ebe ọ bụla n'ime ụlọ, yana n'ime ụlọ ọrụ. Enwere ike ijikọ ha na Amazon Alexa na Google Assistant, maka nke a, ọ dị mkpa ịgbaso usoro ole na ole iji nwee ike iji ngwaọrụ abụọ. Motion mmetụta nwere ike zụta ebe a na Kpọtụrụ ihe mmetụta na njikọ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Switchbot weputara ohuru ohuru 2: Ihe mmetụta Motion na Sensor Kpọtụrụ
Top 10 na-arụ ekwentị nke June 2021
Top 10 Anime Akwụkwọ ahụaja ngwa ọdịnala